Zim schools shine in SA - The Zimbabwean
Chinhoyi High School impressed in South Africa recently when they represented Zimbabwe in the Springs Girls High School Softball Invitation Tournament played on August 31, saw Chinhoyi defy all odds to end second out of eight teams, after they won six of their seven matches that were played in a round-robin format.
Harare’s Girls High School came sixth in a tournament that was won by the host country’s Benoni. “The girls really gave it their all and drew a huge following from the South African teams,” said Witness Nkomo, Secretary-general of the Zimbabwe Softball Association.
“The Chinhoyi combination of pitcher Makanaka Zangaroti and catcher Florence Kandemwa was a marvel to watch in front of the Zone 6 Softball Confederation President, Junior Ramovha, who expressed happiness at the display by the Zimbabwean teams and pledged to support the country’s softball programmes.”
The two teams later played well at the Gauteng Province Open Rally tournament, where Chinhoyi, with mostly Under-17 players, lost 2-11 to the Tshwane University of Technology and beat Seen Saints 8 – 5.
“The games were entertaining and saw some SA teams inquire about Zimbabwean tournaments, and express interest to visit and play Zimbabwean teams,” said Nkomo.
“It was also refreshing to watch players from Zimbabwe, Nodumo Khoza and Nancy Prisca play for South African Club – Red Scorpions. The two were very excited to see young talent from Zimbabwe making life difficult for seasoned Softball players in the Gauteng province.”